Amakhukhi 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Umsebenzisi angabheka uhlobo lwamakhukhi asetshenziswa i-Google, i-Google + Cookie ne-Google Maps, ngokuya ngemibandela esekhasini labo mayelana nokuthi basebenzisa hlobo luni lwamakhukhi.
Amakhukhi e-DoubleClick aqukethe imininingwane ekhomba umuntu uqobo. Kwesinye isikhathi ikhukhi liqukethe okokuhlonza okwengeziwe okufana nokubukeka kwe-ID yekhukhi. Lokhu okokuhlonza kusetshenziselwa ukukhomba umkhankaso wokukhangisa umsebenzisi oke wavezwa kuwo ngaphambilini.; kodwa-ke, i-DoubleClick ayigcini olunye uhlobo lwedatha kukhukhi futhi, futhi, imininingwane ayikhonjwa uqobo.
Own: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat Baphelelwa yisikhathi ekupheleni kweseshini. Bagcina imininingwane yabasebenzisi nezikhathi zabo zokuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
Doubleclick.comDSIS- IDE-ID Izinsuku ze-30 Le khukhi isetshenziselwa ukubuyela ekuqondeni, ekusebenzeni kahle, ekubikeni nasekubonakalisweni kwezikhangiso eziku-inthanethi. I-DoubleClick ithumela ikhukhi kwisiphequluli ngemuva kwanoma yikuphi ukuphrinta, chofoza noma omunye umsebenzi ophumela kukholi kwiseva ye-DoubleClick. Uma isiphequluli samukela ikhukhi, sigcinwa kuso. Imininingwane engaphezulu
info (at) escape-room.online yenza kutholakale kubasebenzisi abafuna ukuvimbela ukufakwa kwamakhukhi ashiwo ngenhla, izixhumanisi ezinikezwe le njongo yiziphequluli ukusetshenziswa kwazo okubhekwa njengokusakazeka kakhulu:
Inqubomgomo yamakhukhi igcine ukubuyekezwa ngomhla ka-20/05/2020